Barry Horowitz amin'ny tsy maha-ao amin'ny Hall of Fame an'i Vince McMahon - Wwe
'Anontanio i Vince' - kintana 90 tsy azony antoka hoe maninona izy no tsy ao amin'ny Hall of Fame WWE an'i Vince McMahon
Nilaza i Barry Horowitz, Superstar WWE teo aloha, fa i Vince McMahon irery ihany no mahalala ny antony tsy nampidirana azy tao amin'ny Hall of Fame WWE.
Horowitz, 62 taona, dia nandany valo taona tany WWE teo anelanelan'ny 1987 sy 1995. Fantatra amin'ny dian-kapoka naharitra, Horowitz dia nifaninana tamin'ny lalao 700 mahery ho an'ny orinasan'i Vince McMahon. Izy koa dia nitolona tamin'ny anarana malaza toa an'i Triple H, The Ultimate Warrior, ary The Undertaker.
ohatrinona ny vidin'ny scott disick
Miresaka momba ny Podcast Shoot tsara toy izany , Nilaza i Horowitz fa manontany matetika momba ny satan'ny mpanazatra sy ny fanesorana ny Hall of Fame izy. Mino izy fa ny filohan'ny WWE Vince McMahon dia tompon'andraikitra amin'ny farany noho izy tsy Hall of Famer.
Ary mianiana aho fa tsy maintsy olon-kafa izany, hoy i Horowitz. ‘Fa maninona ianao no tsy mpanazatra? Ary ahoana no tsy anananao ao amin'ny Hall of Fame? ’Fa maninona aho no tsy mpanazatra? Ary maninona aho no tsy ao amin'ny Hall of Fame? Izao ihany no omeko azy haingana: anontanio i Vince.
Ny underdog an'ny underdogs amin'ny rehetra #tolona fisondrotana #Tratry ny tsingerintaona nahaterahana Barry Horowitz Hanome anao paty amin'ny lamosinao izay tsy mila ianao #DIY pic.twitter.com/kJ06FTuQYE
- Vorona 'Ever So obscure' Original (@fowl_original) 24 martsa 2018
Ny iray amin'ireo zava-nisongadinan'i Horowitz teo amin'ny sehatry ny asany dia tamin'ny fizarana Wrestling Challenge tamin'ny 9 Jolay 1995. Nandresy ny Bodydonna Skip (w / Sunny) izy mba hamaranana ny fihazakazahana WWE tsy misy fandresena.
Mety mbola hiditra ao amin'ny Hall of Fame WWE an'i Vince McMahon ve i Barry Horowitz?
Barry Horowitz dia nipaoka ny lamosiny nandritra ny lalao
WWE Untold (The Nexus), WWE Icons (Lex Luger), ary ny Broken Skull Session (Kevin Nash) dia tokony hiparitaka tamin'ny WWE Network tamin'ny volana lasa teo. Na izany aza, ireo fizarana telo dia nesorina tamin'ny fandaharam-potoana tamin'ny fotoana fohy.
Fanadihadiana iray momba an'i Barry Horowitz koa dia noho ny fahitalavitra tao amin'ny WWE Network, saingy nahemotra ny première noho ny fifanarahana WWE tamin'i Peacock.
Ny WWE dia nanao horonantsary fanadihadiana ahy ny volana desambra, izay heverina fa hanomboka amin'ny Jona, hoy i Horowitz. Saingy raha ny filazan'ny hery mamorona dia ora iray na adiny roa, nahemotra izany noho ny zavatra Peacock, mazava ho azy.
Barry Horowitz dia mamoaka zaza eo am-piandohana ... pic.twitter.com/S4MF41BP7V
- WCW Deep Cuts (@DeepCutsWCW) 16 aprily 2021
Mikasika ny Hall of Fame WWE, nilaza i Horowitz fa manantena izy fa ny horonantsary fanadihadiana WWE Network dia mety hitarika azy hiditra indray andro any.
ahoana no anontaniana olona raha tiany ianao
inona no hatao rehefa tianao ry zalahy 2
jeff mafy tadiavina ny lahatra
haingana toy inona moa no mety hitiavanao olona
manonona anarana adjectif telo izay mamaritra anao
tsy miraharaha an'iza intsony aho